အိမ်ထောင်မပြုခင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း နှင့် လူအများလက်ခံထားသည့် ယဉ်ကျေးမှူ့ အမူကျင့် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » အိမ်ထောင်မပြုခင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း နှင့် လူအများလက်ခံထားသည့် ယဉ်ကျေးမှူ့ အမူကျင့်
အိမ်ထောင်မပြုခင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း နှင့် လူအများလက်ခံထားသည့် ယဉ်ကျေးမှူ့ အမူကျင့်
Posted by etone on Jun 20, 2011 in Health & Fitness, Parenting & Pregnancy, Short Story | 51 comments
ရခဲလှတဲ့ လူ့ဘ၀ ၊ အသက်တချောင်း တန်ဖိုးထားပါ
တနေ့ ကျွန်မအလုပ်တွေ ရှုပ်နေတုန်း … အီတလီက အလုပ်ပါတနာတယောက် ဂျီတော့ကနေ ပါဆယ်နယ် အင်ဖော်မေးရှင်းပေးပါတယ်… ။ သူ့ရဲ့ စာကြောင်းများကို ဖတ်ပြီး ကျွန်မ တော်တော် အံ့အားသင့်သွားပါတယ်… ။ သူကလေးယူတော့မယ်လို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရေးထားတာပါ… … ။ သူ့မှာ အိမ်ထောင်မရှိပေမဲ့ တွဲနေတဲ့ လူပဲ ရှိတာပါ … ။ ကျွန်မလည်း သိချင်စိတ်နဲ့ … အိမ်ထောင်မပြုပဲ ကလေးမွေးမှာလားလို့ တဲ့ပဲ မေးလိုက် မိပါတယ်… ။ သူကလည်း အေးဆေးစွာပဲ … ဟုတ်တယ်တဲ့ … ကလေးတစ်ယောက်လောက် အရင်မွေးပြီးမှ အိမ်ထောင်ပြုမှာပါတဲ့လေ… ။ သိချင်စိတ်နဲ့ ထပ်မေးလိုက်ပါတယ်… ။ နင်တို့ဆီမှာ အိမ်ထောင်မပြုပဲ ကလေးမွေးလျှင် သူများတွေ မကဲ့ရဲ့ဘူးလား ၊ အမွေပြတ်စွန့်လွတ်တာတွေ မရှိဘူးလားလို့ မေးတော့… ဒါက သာမန်ကိစ္စပါပဲ တဲ့ … ။ သူတို့ နိုင်ငံမှာ လူတွေက ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ ကိုယ် ရှုပ်နေတာဖြစ်ပြီး …သူများ အကြောင်းလည်း အတင်းမပြောတတ်ကြပါဘူးတဲ့ … ရှုံ့ချတာလည်း မလုပ်ကြသလို … လူကို လူအတိုင်းပဲ ဆက်ဆံပါတယ်တဲ့ … ။ အိမ်ထောင်ပြုတာ မပြုတာနဲ့ အလုပ်နဲ့ မသက်ဆိုင်သလို … ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအရလည်း ဘာမှ ထိခိုက်မှု မရှိပါဘူးတဲ့… ။
သူ့အမြင်အရ အိမ်ထောင် မပြုပဲ ကလေးမွေးတဲ့ မိခင်တွေကို လေးစားလွန်းလို့ သူလည်း အိမ်ထောင်မပြုခင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာပါတဲ့ … ။ ဒီယောကျာ်းနဲ့ အိမ်ထောင်မပြုပဲ ကလေးမွေးထားပေမဲ့ ….. ချုပ်ကိုင်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲ လွပ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်ပေးထားပါတယ်တဲ့ …. တနှစ်လောက်အထိ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ စဉ်းစားပြီးမှ အိမ်ထောင်ပြုဖြစ်ကြတာပါတဲ့ … ။
ကျွန်မတို့ နိုင်ငံမှာ ယဉ်ကျေးမှူအရ မိန်းမတယောက်ဟာ အိမ်ထောင်ပြုပြီးမှသာ ကလေးမွေးဖွားပါတယ်… ။ အိမ်ထောင်မရှိပဲ ကလေးမွေးဖွားသူ၊ ကလေး ရရှိသွားသူများကို မိဘဆွေမျိုး အသိုင်းဝိုင်းရော ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကပါ မိမိကိုယ်ကို မထိန်းသိမ်းသူအဖြစ်လည်းကောင်း ၊ အညှာလွယ်သူအဖြစ်ဖြင့်လည်းကောင်း ၊ ရှက်စရာ ကိစ္စအဖြစ်ဖြင့်လည်းကောင်း ၀ိုင်းပြီး ကဲ့ရဲ့ ရှုံ့ချထားခဲ့ကြပါတယ်… ။ တန်ဖိုး ကျတဲ့ တပတ်နွမ်း မိန်းမျို အဖြစ်လည်း ကျဉ်ထားကြပါတယ်… ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်မတို့ နိုင်ငံရှိ လူမျိုးအသိုင်းဝိုင်းမှာ အိမ်ထောင်မပြုခင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှူ့ကို ယုတ်ဆိုးတဲ့ အဖြစ်ပျက်အနေနဲ့ သတ်မှတ်ခဲ့ကြတာ ယနေ့တိုင်ပါပဲ …တကယ်ဆို ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့ ကိစ္စမှာ ရည်ရွယ်ပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင် တဲ့လူရှိသလို( အိမ်ထောင်သည်များကို ဆိုလိုပါတယ်) … မရည်ရွယ်ပဲနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့လူဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်… ။ ပထမအမျိုးစားအတွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဟာ မိသားစုတစ်ခုမှာ မင်္ဂလာ ကိစ္စအဖြစ်သက်မှတ်ခံရပြီး …အလေးထား ၊ ဦးစားပေးခြင်းလည်း ခံရတတ်ပါတယ်… ။ ဒုတိယ အမျိုးစား ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းမှာတော့ … လိုချင်လျှက် ရလာခြင်းမဟုတ်ပဲ … အကျိုးကြောင်းမညီညွတ်စွာ အမှတ်တမဲ့ ကိုယ်ဝန်ရလာခြင်းမျိုးပါ… ။ အားလုံးသိတဲ့ အတိုင်း ယဉ်ကျေးမှူတွေ ၊ အစဉ်လာတွေ ၊ လူ့အသိုင်းဝိုင်းတွေ ကြားမှာ အိမ်ထောင်မပြုပဲ ကလေးမွေးခြင်းဟာ ရှုံ့ချစရာလို့ ခံယူထားတဲ့ မြန်မာမိန်းမများအဖို့ … တနည်းနည်းနဲ့ ကြံစည်ဖြေရှင်းကြပါတယ်… ။
အသိဥာဏ်ရင့်သန်မှူပေါ် မူတည်ပြီး ဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းကွာခြားပါတယ်…။ အဲ့ဒီအခါမှာ မလိုလားအပ်တဲ့ အသက်ဆုံးရှံးမှူတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်… ။ အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှူမျိုးကို အရပ်လက်သည်နဲ့ …. နပ်စ်တချို့က ရဲတင်းစွာ လုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်… ။ မက်လောက်စရာမရှိတဲ့ အခကြေးငွေမျိုးလေးရယူပြီး လူ့အသက်တချောင်းကို ဖဲ့ချွေနေကြတာ ဘယ်လို နှလုံးသားမျိုး ပိုင်ဆိုင်ထားပါလိမ့်… ။ ဆေးဆိုင်တွေမှာလည်း ရာဂဏန်းလောက်ငွေနဲ့ … ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဖို့ ဆေးတွေ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတာ … အကျိုးစီးပွား အတော်လေး ဖြစ်ထွန်းပါတယ်…. ။ရာဂဏန်းလောက်ငွေနဲ့ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ကိုယ်ပိုင် အိမ်၊ခြံ ၀ယ်နိုင်လောက်အောင်ပဲ စီးပွားဖြစ်ထွန်းပေမဲ့ … ၀မ်းနည်းစရာကောင်းလောက်အောင် လူ့အသက်ပေါင်းများစွာ ဖဲ့ချွေခံနေရတာပါ… အပြစ်မဲ့တဲ့ ကလေးပေါင်းများစွာ စတေးခံနေရတာပါ… ။ ဒါတွေက ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းဝိုင်းရဲ့ လှုံ့ဆော်မှူတွေကြောင့်ပါပဲ… ။ တချို့ကလည်း ကိုယ်ဝန်ရသွားလျှင် တဖက်က လူကို အဆင်ပြေအောင် ညှိကြည့်တယ်…ပြီးမှ အတိလင်း အိမ်ထောင်ပြုကြတယ်… ။ ဒီလိုဆိုတော့လည်း သာယာတဲ့ မိသားစုလေး ဖြစ်သွားပြန်ရော …
ဒီလိုကိစ္စတွေက အခုလို ကေတီဗွီတွေ ၊ တည်းခိုခန်းတွေ ၊ ဟိုတယ်တွေ မှိုလိုပေါက်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ အဖြစ်ပျက်များစွာ ရှိမှာပါ … ။ အရွယ်မတိုင်သေးတဲ့ ကလေးသူငယ်တွေ အတွက်ကတော့ မဖြစ်သင့်တာ မဖြစ်ရအောင် ထိန်းပေးယုံပဲ ရှိတာပါ … ကလေးဆိုလို့ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းပူးပြီး ကြိုးချည်ထားလို့မှ မရတာ … ။ မိဘကပဲ အသိပညာပေးပြီး ပြောပြရမှာပေါ့ … ။ ဒါဆို သတိလက်လွတ်ကိုယ်ဝန်ရတဲ့ ကိစ္စတွေ အကုန်လုံးမဟုတ်လျှင်တောင် အနည်းငယ်တော့ ကာကွယ်သွားနိုင်မယ်ထင်တယ်… ။
လူ့ဘောင် ကျင့်ဝတ်လို့ အများလက်ခံထားကြတဲ့ … အိမ်ထောင်မပြုပဲ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့ ကိစ္စကိုလည်း …. ရှုံ့ချ အပြစ်တင်တာမျိုး မလုပ်ပဲ … ကိုယ့်ကိစ္စမဟုတ်သလို သဘောထားပေးကြမယ်ဆိုလျှင် လူ့အသက်ပေါင်းများစွာကို ကယ်တင်ရာရောက်နိုင်ပါတယ် … ။ မလိုလားအပ်တဲ့ အသက်ဆုံးရှုံးမှူတွေလည်း နည်းလာလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်… ။ ထို့ အတူ ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာနကလည်း အရပ်လက်သည် အမည်ခံ လူသတ်သမားတွေ ၊ ဆေးဆိုင်အမည်ခံ အဆိပ်ရောင်းချနေတဲ့လူတွေကို စိစစ် ဖော်ထုတ် အရေးယူသင့်ပါတယ်လို့ တိုက်တွန်းလိုက်ချင်ပါတယ် … ။ ။
မသိသလို နေပေးလို့တော့ ရမှာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာလည်း ရှိသေးတယ်လေ။ မဖြစ်ခင်က ရှောင်ကြဉ် တာ တော့ ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်လေ။
အဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှူ ၊ လူ့အသိုင်းဝိုင်း ဆိုတာတွေ အကြောင်းပြပြီး အသက်ပေါင်း ဘယ်လောက်တောင် စတေးခံခဲ့ရပြီးပြီလဲ … ။ လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့ …ကိုယ့်ကိုယ်မှာဖြစ်တာမှ မဟုတ်ပဲ … စာနာပေးလိုက်ပါ ။ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ single mother ဆိုတာတွေတောင်ရှိတယ်… တော်ယုံမိန်းမတွေ လုပ်နိုင်ကြတာမဟုတ်ဘူး ။ ကိုယ်တိုင်လည်း ဖြစ်တာမဟုတ်ပဲ သူများလွယ်ထားရတဲ့ ကိုယ်ဝန်ကို လက်ညှိုးထိုး ရှုံ့ချနေတာကမှ တကယ့်ကို ရှက်စရာကောင်းတာ ။ လက်မခံချင်နေ ၊ မရှုံ့ ချလျှင်ပဲ မိခင်စိတ်ရှိတဲ့ မိန်းမတွေ ကလေးမွေးရဲတဲ့ သတ္တိရှိလာလိမ့်မယ်… ။
မမ အီတုန်းပြောတာကို အပြည့်အဝလက်ခံပါတယ် .. ယဉ်ကျေးမှုကို ဖောက်ဖျက်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး .. အသိပညာ ပေးသင့်တယ်လို့ပြောတာပါ .. မသိပဲ မှားသွားတဲ့အခါ ပညာမရှိပဲ ဇွတ် လုပ်ပြီး အနရာယ် ဖြစ်သွားမှာထက်စာရင် စောစောစီးစီးတည်းက ကာကွယ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် .. မတော်တဆ ဖြစ်သွားခဲ့ရင်လည်း ယောက်ျားလေးက ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တာဝန်ယူတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်လုပ်သင့်တယ် ထင်ပါတယ် .. အသက်တချောင်းက ရခဲပါတယ် .. အပြစ်ရှိချင်းရှိရင် လူကြီးတွေမှာပဲရှိတာပါ .. စတေးလိုက်ရတဲ့ကလေးတွေမှာ ဘာအပြစ်မှ မရှိရှာပါဘူး .. သူတို့ဟာရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘဲ လူ့လောကထဲကိုရောက်လာရရှာတာပါ …
အတင်းအဖျင်း ဆိုတာနံမယ်သာဆိုးတာ…တယ်ခရီးပေါက်တာဘဲ။ အိတုံရဲ့ ဘာမထီ အတွေးအခေါ်ကိုသဘောကျတယ်ဗျာ။ MYOB လို့ခေါ်တဲ့ mind your own business လို့ သဘောမထားနိုင်သေးသရွေ့ အရွယ်ကောင်းတွေ ရော၊ မကောင်းတွေ ပါသေကြနာကြရအုံးမှာပါဘဲ။ ကွန်ဆားဗတစ်ဖြစ်လွန်းသူတွေ ကို ပေးချင်တဲ့ ဥပမာလေးတခုက၊ AIDS စတင်စဉ်က ကွန်ဒုံးဟာ လူ့ယဉ်ကျေးမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ နားနဲ့မနာ ဖ၀ါးနဲ့ နာရတဲ့ ဝေါဟာရတခုဖြစ်တယ်မဟုတ်လား။ ခုချိန်တော့ ဒီရှေးရိုးစွဲအယူအဆက ဒဏ္ဍာရီဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေပါပြီ။
အဓိကကတော့ ဆေးလောကကထဲမှာတောင် ဒီလိုမေးငေါ့ချင်တဲ့ အယူအဆရှိသူတွေ ကို ခ၀ါချနိုင်ဘို့ အရင်ကြိုးစားကြပါစို့လား။
I really appreciate for this post.
အရမ်းကောင်းတဲ့ .. အတွေးအခေါ်ပါတဲ့..စာလေးပါ..။
မြန်မာပြည်က..ရှေးရိုးစွဲတွေများတဲ့အပြင်.. သူတို့က… အာဏာပါဝါကြီးနေတော့… တော်တော်တော့ မလွယ်သေးပါဘူး..။
အဲဒီကွန်ဆာဗေးတစ်တွေက.. သူတို့ကသာ…၀မ်းနဲ့လွယ်ပြီးမမွေးလိုက်တာ… ပါးစပ်နဲ့ရင်းပြီး.. အတင်းတုတ်ဖို့တော့..လုံး၀၀န်လေးမယ်တော့မထင်..။
အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ.. အိမ်ထောင်မကျပဲ..ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာ..ကလေးယူတာဟာ.. အစိုးရဆောင်ရမဲ့.. အမြတ်ခွန်အပါအ၀င်.. တခြားအကျိုးခံစားခွင့်တွေနဲ့လည်း ..ဆိုင်ပါတယ်..။
ဆင်ဂယ်မားသား တွေကို …အစိုးရက..တော်တော်လေးကြည့်ရှု့ စောင့်ရှောက်ပါတယ်..။
နောက်တခုကတော့.. ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဥပဒေကြောင်းအရ..တရားဝင်ခွဲဝေရမှာတို့.. တယောက်နဲ့တယောက်.. ခြေချုပ်မိနေမှာတို့ကို.. မကြိုက်တာလည်း ပါမယ်ပေါ့..။
မွေးစားတာတွေဖယ်ထားဦး.. သူတို့၂ယောက်က ..အမွှာလေးမွေးထားတယ်လေ..။
အိမ်ထောင် မပြုပဲ ကိုယ်ဝန် ရတာကို မြန်မာ လူမှု ထုံးစံက အခုထိလည်း လက်မခံကြသလို နောင်လည်း တော်တော် နဲ့ လက်ခံ လာကြမှာ မဟုတ်သေးပါဘူး။
အဓိက အရေးကြီးတာ ပညာပေးဖို့ပါပဲ။
ပညာပေး အစီအစဉ်တွေနဲ့ မဖြစ်သင့်တာ မဖြစ်အောင် ဖြစ်ခဲ့မယ် ဆိုရင်လည်း ဘယ်လို နေထိုင် ကိုင်တွယ်ရမယ် ဆိုတာပါပဲ။
ဒီပိုစ်မှာ ဆရာဝန်တွေ အများကြီး ၀ိုင်းဆွေးနွေးမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်မရအောင် မီဒီယာတွေရော ၊ ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းတွေကပါ လှုံ့ဆော် ပညာပေးနေပါလျှက် တဖြုတ်ဖြုတ်ရနေကြပါသေးတယ်… ။တကယ့်ကို လက်တွေ့ ဖြစ်ပျက်နေကြတာပါ … ။
ဒီတော့ ထုံးတန်းစဉ်လာဆိုတာနဲ့ …. ကလေးငယ်ရဲ့ အသက်တချောင်း အားပြိုင်နေတာပါ… ။ ထုံးတမ်းစဉ်လာ အရ လူ့အသက်သက်မလား … ။ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဖီလာဆန့်ကျင်ပြီး မွေးမလား စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ … အဲ့ဒီလိုလူအများစုက ရွတုန်းက ရွပြီး တကယ်တမ်း သတ္တိမရှိလို့ အပြစ်မဲ့တဲ့ ကလေးတွေ လူ့လောက ထဲ မရောက်ရရှာဘူး … ။
ကာမဂုဏ်အမိုက်က အမှောင်တကာ့အမှောင်ထဲမှာ အနက်ဆုံးမို့ လူသားတွေ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ဖြစ်ကြတဲ့ ဒီသနစ်တွေကို၊ ၀ါးလုံးရှေနဲ့ ရမ်းပြီး အပြစ်ဖို့ကြရုံနဲ့ ပြီးရောတဲ့လား။
ဒီကိစ္စက နည်းနည်းတော့ ပြောရခက်မယ်ထင်တယ် ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်လို့ မရှုံ့ ချ ဘာမှမပြေပဲနေရင် မိခင်စိတ်၇ှိတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ အဆင်ပြေသွားမယ်ဆိုပင်မဲ့ ဒီအတိုင်းပဲ မိခင်စိတ်ရှိလို့ရယ်မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ကိုဘာကိုယ် ကဲလို့ ရလာတဲ့ သူတွေအတွက်ကတော့ မိဘမဲ့ ကလေးတွေများလာမယ်လို့ပြောရမလိုပဲ
ယူမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး အခြေအနေမပေးလို့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ညှိချင်လို့ဆိုတာက ဒီလူ့အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ ယဉ်ကျေးမူမှာ လက်ခံလာနိုင်ဖို့ တော်တော်လေး ကြိုးစားရဦးမယ်ထင်တယ်
ကိစ္စတစ်ခုမှာ မကောင်းတဲ့ အချက်တွေရှိသလို ကောင်းတဲ့ အချက်လေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ ဒီကိစ္စကို
လူ့အသိုင်းအဝိုင်း တစ်ခုလုံးက လက်ခံနိုင်မယ်ဆိုလဲ မဆိုးပါဘူး… ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်း တစ်ခုခုတော့ ၇ှိနိုင်မယ်ထင်ပါတယ် …
ဒါလည်း မော်ဒန်ပိုစ့် တစ်ခုပဲ။
စဉ်းစားစရာ၊ ချင့်ချိန်စရာတွေ အများကြီးပါ။
သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ အများကြီး ကြုံနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လမ်းကြောင်းကို ကောင်းတယ်လို့တောင် ထင်မြင်ချက်မပေးတတ်အောင်ပါပဲ။
အဓိက ကပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်လို့ လဲပြောလို့ ရတယ် အိမ်ထောင် မပြုပဲ ကိုယ်ဝန် ရလာပီဆိုရင် အားပေးဖို့ ခွန်အားပေးဖို့ အကြံပေးဖို့ ထက်ဝိုင်းပြီးပြစ်တင်ရှုံ့ချတဲ့ လူကပိုများနေမလားပဲ ….
နိ်ုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေ မှာ abortion လုပ်တာ တရားဝင်ခွင့်ပြုထား ပေမယ့် မြန်မာပြည်မှာဒီလိုလုပ်တာခွင့် မပြုတော့ အသက်တောင်ဆုံးရှုံးရတာတွေတောင် ရှိမယ်ထင်တယ်… ဗုဒ္ဓဘာသာ အနေနဲ့ ကြည့်ရင်လဲ အပယ်လားမဲ့အလုပ်ပါ…..
တစ်ချို့အိမ်ထောင်ရှင်များကျတော့ သားသမီးလိုချင်တာ မရလို့နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကြိုးစားရ
တစ်ချို့ ကျတော့မလိုချင်လို့ မွေးပြီးပစ်သွားရတာနဲ့ ဖျက်ချရတာနဲ့ ….
လူငယ်များအနေနဲ့ ဒီလိုမျိုးပညာပေးတွေဆိုရင် ရှက်စရာလို့မမြင်ဘဲ ဗဟုသုတနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လေ့လာသင့်တယ် လို့ထင်ပါတယ် ….
” မြန်မာပြည်မှာ abortion လုပ်တာ တရားဝင်ခွင့်ပြုထားပါတယ် ”
This isareal story happened in Myanmar.
If you applied with strong reason they will approve “abortion” in Myanmar.
( strong reason = the child will born with disabilities )
But, there werealot of arguments between Doctors &
the processing takes too long ( about3months ).
Finally, they got Abortion approval from “Myanmar Medical Board”.
You see, after ( realization3month + processing3months ),
pregnant mother can even sense/touch the heart beat of the child &
How can she proceed this abortion ???
( it looks really cruel to the baby )
Finally she chose to take her baby. ( Abolish Abortion Approval )
ကိုယ့်ကိစ္စမဟုတ်သလိုတော့ နေကြမယ်မထင်ဘူး။ လူဆိုတာက ကိုယ့်မျက်ချေးသာ မမြင်တာ သူများမျက်ချေးတော့ မြင်တတ်တယ်လေ။ မသိလို့၊ သိသိနဲ့ မိုက်လို့ အပြစ်မရှိတဲ့ ကလေးလေးတွေတင် ဘယ်ကမလဲ ကိုယ့်အသက်ပါ ပေး၇သူတွေကို ကြားလည်းကြားရတယ်။ မျက်စိရှေ့မှာတင် ပျောက်သွားသူတွေ အတော်များတယ်။ တချို့ဆို တရားဝင် အိမ်ထောင်ရှိလျှက်နဲ့ သူတပါးကို သတ်ဖို့ ကြံရင်း ကိုယ်ပါသေသွားရတာ။ မလိုချင်ရင် အစကတည်းက ကာကွယ်ထားသင့်တယ်။ နောက်တခုက ဆေးရုံမှာ တရားဝင် လုပ်ခွင့်ပေးရင် (နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ကျေနပ်ရင်) အခုလို မလိုလားအပ်တဲ့ အသက်ဆုံးမှုတွေ နည်းသွားမယ် ထင်တယ်။
ကျွန်မ တို့ မြန်မာ လူမှု အသိုင်းအ၀ိုင်း ကြီးတစ်ခုလုံး အမြင် ပြောင်လဲ ဖို့ ဆိုတာ မလွယ် ဘူးထင်တယ်။ ကျွန်မ တို့ မြန်မာလူမှု အသိုင်း အ၀ိုင်းမှာ က မိန်းမ ဆိုရင် နဂိုကတည်း က အကောင်း မမြင်ခဲ့ကြဘူး။ အဲဒီ ထဲမှာ မှ အိမ်ထောင်မရှိဘဲ ကလေး ကိုယ်ဝန်ဆောင်တယ် ဆိုတော့ ပိုပြီးတော့ နှိမ့်ချစရာ အဖြစ် ပိုမြင်လာ ကြ တယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ အောင် ထိန်းထိန်း သိမ်းသိမ်းနေကြပေါ့။ မထိန်းသိမ်း နိုင်ရင်လည်း ဒီခေတ်ကြီးမှာ ဆေးတွေ မျိုးစုံပေါ့ပါတယ်။ တကယ်လို့ ရလာရင်လည်း အရာရာ ကို ရင်ဆိုင်ပြီး မွေးလိုက်ပေါ့။ အသက်အန္တရာယ် ကို ထိခိုက်စေတဲ့ အပြုအမူမျိုးတော့ ရှောင်ကြဉ် သင့်တယ်။
ဒီခေတ်မှာ မိန်းမတွေကို နှိမ့်ချလို့မရတော့ပါဘူး ။ ယောကျာ်းတွေနဲ့ ရင်ပေါင်တန်းပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ မိန်းမတွေ လည်း ဒုနဲ့ ဒေးဖြစ်လာပါပြီ ….။ အရင်က လို မိန်းမဆို အိမ်ထဲပဲ အောင်းနေရမဲ့ ခေတ်လည်း ကုန်လွန်ခဲ့ပါပြီ ။ မိန်းမတွေ အရမ်းကို ထက်မြက်လာတဲ့ ခေတ်မှာ ဒီ အယူအဆတွေလည်း တတ်နိုင်သမျှ ဖျောက်သင့်ပြီ ။
သေချာတာပေါ့ မိန်းမတွေ တွေ အရမ်းထက်မြက်လာပါပြီ။
ဒီခေတ်မှာ မိန်းမတွေကို နှိမ့်ချလို့မရတော့ပါဘူး ။ ယောကျာ်းတွေနဲ့ ရင်ပေါင်တန်းပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ မိန်းမတွေ လည်း ဒုနဲ့ ဒေးဖြစ်လာပါပြီ ….။ အရင်က လို မိန်းမဆို အိမ်ထဲပဲ အောင်းနေရမဲ့ ခေတ်လည်း ကုန်လွန်ခဲ့ပါပြီ ။ မိန်းမတွေ အရမ်းကို ထက်မြက်လာတဲ့ ခေတ်မှာ ဒီ အယူအဆတွေလည်း တတ်နိုင်သမျှ ဖျောက်သင့်ပြီ။
ဆိုတော့ကာ မိန်းမတွေက မှီခိုရမယ့်သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီး မင်္ဂလာဆောင်မှာ သတို့သားဘက်ကို တင်တောင်းခိုင်းတာ ဟိုဟာလုပ်ပေးဒီဟာလုပ်ပေး ဆိုပြီး တောင်းဆိုတာတွေ စတဲ့အကျင့်၊ အတွေးအခေါ်တွေလည်း ရပ်သင့် ပြောင်းသင့်ပါပြီ ထင်ပါတယ်။
ကလေး ဖျက်ချ တဲ့ ကိစ္စ နဲ့ သတိုးသားဘက်က တင်တောင်းတဲ့ကိစ္စ နဲ့ မဆိုင်ဘူးလေ..
eros ရေ ယောကျာ်းလေးဘက်က တင်တောင်းတဲ့ လူတွေ ရှိနေသေးသလို ၊ တင်တောင်းစရာမလိုတဲ့ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်ညှိနှိုင်းတဲ့ ခေတ်လည်း ရောက်လာခဲ့ပါပြီ ။ တကယ်တမ်း မင်္ဂလာဆောင်ခါနီး တင်တောင်းတယ်ဆိုတာ သတို့သမီးဘက်က မိဘတွေ ဆင်ဖြူတော်မှီပြီး ကြံစုပ်တယ်လို့ပဲ ထင်ပါတယ် … ။ ရိုင်းရိုင်း ခိုင်းနှိုင်းရလျှင် ၀က်မွေးပြီး ပေါ်စားတာမျိုးနဲ့ တူပါတယ် ။ ကိုယ်အနှစ်နှစ်အလလ စောင့်ရှောက်ကျွေးမွေးထားတဲ့ သမီးကို တန်ဖိုးတစ်ခုအနေနဲ့ ဖြတ်လိုက်ခြင်းမျိုးမို့ လုံးဝ မကြိုက်ပါဘူး ။ တစ်ခုတော့ ရှိတယ် ယောကျာင်္းလေးဘက်က ပိုင်ဆိုင်သမျှကို ကြွားချင်လို့ …. ထုတ်ပေးလျှင်တော့ တမျိုးပေါ့ … ။
ကိုယ့်ဒူး ကိုယ်ချွန်မိန်းမတွေ ပေါက်ဖွားလာပြီမို့လို့ … … ယောကျာ်း မယူခင် ဘယ်လောက်ရမယ်မှန်းမသိတဲ့ ပမာဏကို မက်မောပြီး အိပ်မက်လည်း မက်မနေတော့ပါဘူး … ။ တင်တောင်းတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စလည်း တစ တစ ပျောက်လာတော့မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။
အဓိက ပြသနာရဲ့ ရင်းမြစ်ကတော့ မပွင့်လင်းမှု ဖြစ်ပါတယ် … သူများတိုင်းပြည်တွေမှာက အဲဒီလိုကိစ္စတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုလို့ရပေမယ့် မြန်မာပြည်မှာ အဲဒီလောက်ခေတ်မမှီသေးပါဘူး … ရည်းစားတွေဖြစ်ကြရင် အိနြေ္ဒနဲ့ ကောင်လေးကလဲ သိက္ခာရှိချင်ယောင်ဆောင်မယ် … ကောင်မလေးကလဲ ပြောရမှာရှက်မယ် … ပြီးတော့မှ မတော်တဆနယ်လွန်သွားသလိုလုပ်ကြမယ် … ဖြစ်ပြီးပြန်တော့လဲ မိဘတွေကို အသိမပေးရဲကြပြန်တော့ ကိုယ်ဝန်ပြသနာတွေ ဖြစ်လာကြရော …
ဒီလိုပဲ ဆက်ဖြစ်နေကြအုန်းမှာပဲ … နောက်ထပ်မျိုးဆက်သစ်တစ်ခုရောက်မှပဲ ကိုယ်ချင်းစာစိတ် နားလည်စိတ်နဲ့ ခေတ်မှီလာမည်ဟု မျှော်လင့်မိပါတယ် …
ဒီမှာ တော့ ဒီအယူအဆ အတွက် ဘာသာရေးရှုထောင့် လူမှုရေး ရှုထောင့် ကနေ အငြင်းပွားစရာတွေ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျမကတော့ တကမ္ဘာလုံး က single mother တွေ အားလုံးကို လေးစားတယ်။ ဘာအ
ကြောင်းကြေင့် ပဲ ကလေးရခဲ့ ရခဲ့ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူရဲတဲ့ စိတ်ဓာတ် က ချီးကျူးစရာကောင်းပါတယ်။
” ဘာသာရေးရှုထောင့် ကနေ အငြင်းပွားစရာတွေ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ”
I don’t think we have an argument ( အငြင်းပွားစရာ ) in religious view ( ဘာသာရေးရှုထောင့် ).
Because, our Lord Buddha never forbidden to be single mother.
Only some people who don’t understand human right & အတင်းတုတ်/အတင်းချတဲ့ people care about it.
This is really ( really ) true.
သူတို့ နိုင်ငံမှာ လူတွေက သူများအကြောင်းလည်း အတင်း မပြောတတ်ကြပါဘူးတဲ့ … ရှုံ့ချတာလည်း မလုပ်ကြသလို …
လူကို လူအတိုင်းပဲ ဆက်ဆံပါတယ်တဲ့ … ။
( လူကို လူအတိုင်းပဲ ဆက်ဆံပါတယ် )
အိမ်ထောင်ပြုတာ မပြုတာနဲ့ အလုပ်နဲ့ မသက်ဆိုင်သလို … ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအရလည်း ဘာမှ ထိခိုက်မှု မရှိပါဘူးတဲ့… ။
ဒီယောကျာ်းနဲ့ အိမ်ထောင်မပြုပဲ ကလေးမွေးထားပေမဲ့ ….. ချုပ်ကိုင်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲ လွပ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်ပေးထားပါတယ်တဲ့ ….
မလုပ်ခင် ကတဲ က ကြိုကာကွယ် တာ ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။ ဆေးဆိုင်တွေ ကို သာ ပိတ်လိုက်ရင် ကလေး မယူချင်သေးတဲ့ အတွဲ တွေ အတွက် ။ အဆင်မပြေ နိုင်တဲ့ အတွဲ တွေ အတွက် ဆေးဘယ်သူ ရောင်းပေးတော့မလဲ ။ ယောက်ျား မှာ အသိမရှိခဲ့ရင်တောင် မိန်းမ လုပ်သူ ဘက်မှာ လဲ အသိတရား ရှိဖို့ လိုနေပြီ လို့ ထင်ပါတယ် ။ ( မှတ်ချက် ။ ။ ကျွန်တော် ဆေးဆိုင် မဖွင့်ပါ ။ ဆေးမရောင်းပါ ) ။ အခြေခံ က နေ ပြန်ပြင်ရမယ့် ကိစ္စ မှာ ကိုယ့်နီးစပ်ရာ ကို ပဲ နားလည် သဘောပေါက်အောင် ပညာပေး ဆွေးနွေးခြင်း ဖြင့် ကာကွယ်ရာ ရောက်မယ် လို့ ထင်တယ်ဗျာ ။
ကျွန်မစာထဲမှာ ဆေးဆိုင်တွေကို ပိတ်ခိုင်းတာ မဟုတ်ဘူးလေ … ။ တရားမ၀င် ၊ မရောင်းသင့်တဲ့ ဆေးတွေကို ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေ ၊ ဥပဒေမဲ့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းကို ငရဲမကြောက် လက်မတွန့် လုပ်ပေးနေတဲ့ ဆေးဆိုင်တွေ ၊ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျစေနိုင်တဲ့ ဆေးမျိုး ၊ သန္ဓေသား ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ဆေးမျိုး ရောင်ချတဲ့ ဆိုင်တွေ ကို စနစ်တကျ စိစစ် ပိတ်ပင် စေချင်တာပါ … ။
မလုပ်သင့်၊ မရောင်းသင့်တဲ့ ဆေးတွေ ရောင်းတဲ့ဆိုင်တဆိုင်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်မသိထားတာလေးတွေ ရှိတယ် … ။ ဓါတ်ပုံပါ ရယူနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ် ။ အဲ့ဒီဆေးဆိုင် လွန်နေပြီ … တော်တော့်ကို လွန်တာ ။
single မားသား ကိစ္စက ဆိုင်ရာ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ပွင့်လင်းမှုနဲ့ဆိုင်သလို့ အစိုးရများရဲ့ ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်မှုနဲ့လည်းဆိုင်တယ် ထင်ပါတယ်။ ချမ်းသာတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာ မိန်းမ၊ယောက်ျား တန်းတူ အလုပ်အကိုင်ဝင်ငွေရ၊ လူမှုဖူလုံရေး အထောက်အပံ့တွေလည်းကောင်းတော့ လင်ဆိုးမယား တဖားဖားအဖြစ်ထက် စင်ဂယ်လ်မားသား ဘဝကို ပြောင်းယူပါတယ်။ အချို့ကလည်း လစ်ဘရယ်ကြလို့ နဂိုထဲက လက်ထပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘဲ ခလေးယူပါတယ်။ အဲဒါမျိုးကတော့ နည်းပါလိမ့်မယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာလည်း ဆယ်ကျော်သက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှု ပြသနာကြီးကြီးမားမား ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်း နေရတာပါ။ လိင်ကိစ္စပညာပေးနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းသလို ဘာသာရေးလို စောင့်စည်းမှု ကိုယ်ကျင့်တရားဖက်ကလည်း ချဉ်းကပ်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ လိင်ကိစ္စလိုဟာမျိုးက ထိန်းရအတော် ခက်ပါမယ်။ အားလုံးချမ်းသာတော့လည်း အပျော်ကျူးလို့၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာဟပြန်တော့လည်း အနိုင်ကျင့်ခံရလို့ အမြဲဆင်ခြေရှိနေမှာပါ။ ကျနော့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ မြန်မာsingle mother များ သိပ်မတွေ့မိသေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ အနောက်တိုင်းစတိုင် လူနေမှုပိုင်စံ၊ ယောက်ျားလေးရော မိန်းခလေးပါ ချစ်သူရည်းစားကွယ်ရာ ဖေါက်ပြန်မှု၊ လင်မယား နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ ပြင်ပအိမ်ထောင်ရေး အရှုပ်အရှင်း စတာတွေတော့ မသိချင်အဆုံး ဖြစ်နေပါပြီ။ နောက်မှပဲ တွေးမိတာလေးကို ပို့စ်တခုတင်ပါအုံးမယ်…
“ချမ်းသာတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာ မိန်းမ၊ယောက်ျား တန်းတူ အလုပ်အကိုင်ဝင်ငွေရ၊ လူမှုဖူလုံရေး အထောက်အပံ့တွေလည်းကောင်းတော့ လင်ဆိုးမယား တဖားဖားအဖြစ်ထက် စင်ဂယ်လ်မားသား ဘဝကို ပြောင်းယူပါတယ်။”
“အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ.. အိမ်ထောင်မကျပဲ..ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာ..ကလေးယူတာဟာ.. အစိုးရဆောင်ရမဲ့.. အမြတ်ခွန်အပါအ၀င်.. တခြားအကျိုးခံစားခွင့်တွေနဲ့လည်း ..ဆိုင်ပါတယ်..။”
“ဆင်ဂယ်မားသား တွေကို …အစိုးရက..တော်တော်လေးကြည့်ရှု့ စောင့်ရှောက်ပါတယ်..။”
“နောက်တခုကတော့.. ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဥပဒေကြောင်းအရ..တရားဝင်ခွဲဝေရမှာတို့.. တယောက်နဲ့တယောက်.. ခြေချုပ်မိနေမှာတို့ကို.. မကြိုက်တာလည်း ပါမယ်ပေါ့..။”
ဒီလို ပွင့်လင်းရဲရင့်သော အတွေးမျိုးကို အီးတုံးတို့ ဒေါ်ဝေတို့လို လစ်ဘရယ်အမျိုးသမီများကနေပြီး
အမျိုးသမီးများအခွင့်အရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်သင့်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ကဲကြပြီး
မိန်းကလေးမှာမှ ပြဿနာအထုပ်က ထွေးမရ မျိုမရနဲ့ အတော်သနားဖို့ကောင်းပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ မွေး
ချင်တဲ့သူမွေးပစေပေါ့။ ဘေးက အပြစ်ပြောနေကြလို့ သာ အပြစ်ဖြစ်တာလေ။ အပြစ်မပြောဘူး ဒါသဘာဝပဲ။
သမီးရည်းစား ထားရင် ဒီလိုဖြစ်မယ်၊ လွန်တဲ့အခါလွန်မယ်။
ဒါကို စိတ်ညစ်စရာအဖြစ်သဘောမထားပဲ နှိမ်စရာအဖြစ် မမှတ်ပဲ ပုံမှန်သဘောထားလိုက်ရင် ဖြစ်လာတာကို မိန်းကလေးတွေက တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှင်းပြီး နေနိုင်မှာပေါ့။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ဒါတွေဖြစ်နေတာ အခုမှ
မဟုတ်ဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်လေးငါးဆယ်က စလို့ ကိုယ်လူမှန်းသိတဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀-၃၀ လောက်ကတည်းက
ဒါတွေကြားဖူးနေတာပဲ။ ဖျက်ချလို့ သေသွားတဲ့ အစ်မကြီးတစ်ယောက်အကြောင်းတောင် သတိရမိသေးတယ်။
တစ်ယောက်တည်းပဲ မွေးလိုက်တာ ကလေးတောင် အသက်၃၀လောက်ရှိနေတဲ့ အစ်မကြီးတစ်ယောက်တော့ ဒိန်းမတ်တောင် ရောက်နေလေရဲ့။ အဓိက ကတော့ ရည်းစားထားပြီး လွန်တဲ့၊ တာဝန်မယူနိုင်သော မယူရဲသော ကောင်လေးတွေနဲ့ လွန်မိတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ပြစ်တင်ရှုံ့ချ မလုပ်ဖို့ပါ။
မြန်မာပြည်အတွက် single mother ကိစ္စကို ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တော့ တော်တော်ကြီးကို အချေအတင် ဖြစ်သွားမယ်ထင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်လေ သိတယ်မဟုတ်လား။ ရှေးရိုးစွဲ လူကြီးတွေက လည်း အခုထိ ရှိနေတုန်းဆိုတော့ လက်ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကလည်း အတင်းပဲ ပြောချင်နေကြတာ ။ မလိုချင်သေးရင် အစောထဲက မဖြစ်အောင်နေပေါ့ ။ ဆေးသောက် ၊ ဆေးထိုး ကိုယ့်ဘာ့သာ ဆင်ခြင် လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရလာခဲ့ ရင်တော့လည်း အသက်တချောင်း တန်ဖိုး ထားသင့်ပါတယ် ။ လူ့ဘ၀ ဆိုတာ ရခဲပါတယ်။
I would like to write different opinion of your idea.
If you encourage single mother, this is the chance for guys who do want to take their responsible.
I agreed to Lin wai Kyaw that ” တကယ်တမ်းတော့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ကဲကြပြီး
မိန်းကလေးမှာမှ ပြဿနာအထုပ်က ထွေးမရ မျိုမရနဲ့ အတော်သနားဖို့ကောင်းပါတယ်။ “
လက်မထပ်ခင်ကိုယ်ဝန်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကိုယ်ဝန်အတွက် နာမည်တပ်စရာ ဖခင်လောင်းရှိတယ်-လို့ ဆိုလိုတာလို့ နားလည်ပါတယ်။
ဆင်တူယိုးမှားအဖြစ်တစ်မျိုးကတော့ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကိုယ်ဝန်ပိုင်ရှင်ကို မဖေါ်ပြနိုင်လို့ အဖေမပေါ်ဘဲကိုယ်ဝန်ရှိတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ဟာ (၄၀-တန်း) သက်လတ်ပိုင်းအရွယ်ရောက်ပါပြီ။ (အရွယ်ရောက်တဲ့)သမီးရော နှမရော အမေရော ရှိတဲ့အရွယ်ပေါ့။
ကျွန်တော့်သမီးက လက်မထပ်ခင်ကိုယ်ဝန်ရှိရင်-ဆူမယ်။ အပြစ်တင်မယ်။ ပြီးတော့ ကလေးကိုရဲရဲမွေးဘို့ပြောမယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိသွားလို့ အရှက်ကွဲမှာစိုးလို့ ဇွတ်မှိတ်လက်ထပ်စရာ မလိုဘူးဆိုတာပြောပြမယ်။
ကျွန်တော့်သမီးက ပိုင်ရှင်မပေါ်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ရှိရင် -အပြစ်တင်မယ်၊မဆူဘူး(မထူးတော့လို့)။ပြီးတော့ ကလေးကိုရဲရဲမွေးဘို့ပြောမယ်။ အားပေးမယ်။
ကျွန်တော့်နှမက လက်မထပ်ခင်ကိုယ်ဝန်ရှိရင် – မသိချင်ယောင်ဆောင်နေမယ်။ လိုအပ်သလိုစောင့်ရှောက်မယ်။ ကူညီမယ်။ ကလေးကိုရဲရဲမွေးဘို့ပြောမယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိသွားလို့ အရှက်ကွဲမှာစိုးလို့ ဇွတ်မှိတ်လက်ထပ်စရာ မလိုဘူးဆိုတာပြောပြမယ်။
ကျွန်တော့်နှမက ပိုင်ရှင်မပေါ်ဘဲကိုယ်ဝန်ရှိရင် ဆူမယ်။ သောင်းကျန်းမယ်။ ရှက်လို့ သူငယ်ချင်းတွေကို ရှောင်နေမယ်။ ကလေးကိုမွေးမွေး မမွေးမွေး ထည့်မစဉ်းစားတော့ဘူး။ (မွေးပြီးရင်တော့ အဲဒီကလေးကို ချစ်မှာပါ။)
ကျွန်တော့်အမေက ကျွန်တော့်ကို လက်မထပ်ခင် ကိုယ်ဝန်ရှိပြီးမှမွေးတာဆိုရင်….လဲ သိပ်တော့ကိစ္စမရှိပါဘူး။ အခုလဲ အဖေရော အမေရော အစုံရှိနေတာပဲ..။
ကျွန်တော့်အမေက ကျွန်တော့်ကို အဖေမပေါ်ဘဲ မွေးခဲ့တာဆိုရင်တော့ ……ငယ်စဉ်တဘ၀လုံး အရှက်ကွဲ အားငယ် ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရမှာ ….
အခုအရွယ်ထိတောင် ဒီဒါဏ်ရာတွေ ကျက်ချင်မှကျက်ဦးမှာ …….။
ယောကျာ်းရော မိန်းမရော အတင်းပြောတဲ့လူက အတင်းပြောတဲ့ အကျင့်ရှိပါလျှက်နဲ့ မိန်းမတွေက ယောကျာ်းတွေထက်ပို အတင်းပြောတတ်တယ်လို့ လူအများစု လက်ခံထား ကြတယ်… ။ အဲ့ဒါကလည်း ရှေးယခင်မိန်းမများ အပြင်ထွက် အလုပ်မလုပ်ရတဲ့ အခါ ၊ အိမ်အလုပ်ပြီးလို့ အားလပ်ချိန်လေးများရလျှင် ဟိုအိမ်သွားအတင်းပြော၊ ဒီအိမ်သွား အတင်းပြောရာကနေ ၊ ကိုယ်နဲ့ မတူတာမျိုးဆို ထိုးဆိတ်ချင်စိတ်က ဖြစ်နေတော့တာပေါ့ … ။ ပြောခံရတဲ့ မိန်းမခမျာ အနေထိုင်မတတ်ဘူး ဆိုတဲ့ အပြောမျိုး ကန့်လန့် နားထဲ ၀င်ပြီး လူတော မတိုးရဲတဲ့ ပြစ်မှူ ကြူးလွန်ထားသလို ဖြစ်မယ်… ။ တကယ်ဆို နှစ်ဦး နှစ်ဖက် ကျေနပ်လို့ ချစ်ကြိက်ကြပြီး လွန်သွားတာ ဘေးက အတင်းပြောနေတဲ့ လူတွေနဲ့လည်း မဆိုင်ပါဘူး … … အတင်းပြောရုံကလွဲလို့ ဘာအကူညီမှ မပေးနိုင်တဲ့ လူတွေကို သွားဂရုစိုက်မနေပဲ …. အန္တရယ်ကင်းကင်း ကလေးမွေးသင့်ပါတယ်… ။ အတင်းပြောတဲ့ လူတွေ နားလည်ထားရမှာကလည်း … မိမိတို့ နှုတ်ဖွာခြင်း ကြောင့် အပြစ်မဲ့တဲ့ လူသားတွေ လူ့ဘ၀ထဲ မွေးဖွားခွင့်မရပါလားဆိုတာပါပဲ… ။
လူတွေများ နေတတ်လျှင် အေးဆေးပါ … အရေမရ အဖတ်မရ လက်ညိုးထိုး သွားပြောနေတော့ ဦးဏှောက်မရှိတဲ့ လူတွေက ဖျက်ချရော… ဒါနဲ့ပဲ ဆေးရုံဆေးခန်းတွေ ရောက်ရော… ။ ဇစ်မြစ်ကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရရော …သေတဲ့လူလည်း သေရော… ။
နာလည်း 10 လိုချင်လို့ ၀င်ဖောလိုက်အုန်းမယ်ဗျ …
single mother ဆိုတာတော့ မြန်မာပြည်အနေနဲ့ လက်ခံနိုင်သေးတဲ့ အခြေအနေ ရှိမှာမဟုတ်သေးပါဘူး
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရရှိလတဲ့ ကိုယ်ဝန်ကို ဖျက်ချဖို့ မကြိုးစားဘဲ မွေးဖွားဖို့ ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့
အားလုံးရဲ့ အားပေးမှုကလည်း ကြီးမားတဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်နေပါတယ် …
လူ့အသက်တစ်ချောင်းဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူလှပါဘူး … ကျွန်တော်ကတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လို နည်းနဲ့ပဲ ရရ ရရှိလာတဲ့ ကိုယ်ဝန်ကို မွေးဖွားစေချင်ပါတယ် … လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း ဖြစ်ပြီးမှတော့
ရှုတ်ချ ကဲ့ရဲ့တာမျိုးမလုပ်ကြဘဲ အားပေးကူညီထောက်ပံ့မှုမျိုးကို လုပ်စေချင်ပါတယ် ….
အဲဒီလိုမျိုးကို ထောက်ခံပေမယ့် single mother ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် သိပ်တော့ လက်သင့် မခံနိုင်သေးဘူးဗျ …. ဓလေ့ထုံးတမ်းအရသော်လည်းကောင်း … လက်ရှိအခြေအနေရသော်လည်းကောင်း … မိခင်တစ်ဦးထဲနဲ့ သား/သမီးကို လုံလောက်အောင် ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်နိုင်စွမ်းရှိချင်ရှိမယ် … ဒါပေမယ့်ဗျာ
သား/သမီးဆိုတဲ့ နှလုံးသားနုနယ်လှတဲ့ကလေးလေးတွေဟာ ဘယ်လောက်ပြည့်စုံအောင်ထားနိုင်ထားနိုင် သူတို့မှာ
တစ်ခြားကလေးတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ အားငယ်နေမယ်လို့ထင်မိတယ်ဗျ (ကိုယ့်အထင်နဲ့ ရမ်းတုတ်ခြင်းသာဖြစ်)
အခုတော့ ဗိုက်ဆာလာလို့ ဆက်မဖောလိုက်တော့ဝူးဗျာ ……. :D
အရွယ်မတိုင်ခင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း နဲ့ မလိုချင်တဲ့အခါ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းတို့က ကာယကံရှင်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်နိုင်တဲ့ ပြဿနာပါ ..
အိမ်ထောင် မပြုခင် ကိုယ်ဝန် မရှိစေချင်ကြတာက လက်ရှိ ကျင့်ဝတ်အရ လက်ခံထားတာပါ ..
အိမ်ထောင် မပြုခင်မှာ ကိုယ်ချင်း မရင်းနှီးကြစေချင်တာက မိဘတိုင်းလက်ခံထားကြတဲ့ သဘောတရားပါ ..
တို့လဲ သမီးတွေ မွေးထားသူပါ .. ဘယ်သူကမှ ဟေ့ ငါ့သမီး အိမ်ထောင်မပြုခင်ကတည်းက ဗိုက်ကြီးနေပြီ လို့ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ ပြောကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး ..
ဒါပေမယ့် လက်ရှိ လူနေမှုဘ၀က အရင်တုန်းကနဲ့ မတူပဲ multimedia တွေကြောင့် အရင်တုန်းက ဒီအရွယ်တွေ မသိခဲ့တဲ့ဟာတွေ အခုလူငယ်တွေ သိကုန်ကြပြီ .. ဒါကြောင့် အိမ်ထောင်မပြုခင် ကိုယ်ချင်း ရင်းနှီးကြတာ မဆန်းဘူးလို့ ထင်နေကြပြီ ..
ဒါပေမယ့် ကိုယ်ချင်းသာ ရင်းနှီးချင်ကြတာ.. နောက်ဆက်တွဲပြဿနာကိုတော့ မသိကြသူတွေ များပါတယ် ..
ဒါကြောင့် အဖွဲ့အစည်းအတော်များများက ဒီလို ပြဿနာတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ ကိုယ်ဝန် ရတယ် ဆိုတာ ဘာကြောင့် .. ဘယ်လို ဆိုရင်ဖြင့် ကိုယ်ဝန် မရနိုင်ပါဘူး ဆိုတာကို လူငယ်တွေ သိအောင် ပြောပြပေးကြတယ် .. ဒါတွေကို ပြောပြပေးချိန်မှာပဲ ဒီလို အိမ်ထောင်မပြုခင် အန္တရာယ် ကင်းကင်းနဲ့ ကိုယ်ချင်း ရင်းနှီးကြစေဖို့ ပြောတာမဟုတ် .. မတော်တဆများ မှားယွင်းမိကြရင် ဆိုတဲ့ ချွင်းချက်နဲ့ ကိုယ်တိုင် ဆင်ခြင်ဖို့ .. မိမိ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေကိုလဲ မဖြစ်သင့်တာ မဖြစ်စေဖို့အတွက် အသိပညာ ဆင့်ပွားပေးကြဖို့ ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို အမြဲ ထည့်ပြောကြတယ် .. ဒါတောင်မှ မြို့ပေါ်မှာ အရေးပေါ် ကိစ္စတွေ တွေ့နေကြတုန်း .. နယ်မှာ ဆိုရင်တော့ ပိုဆိုးသေး ..
လက်ရှိအခြေအနေမှာ မိဘနဲ့ သားသမီး ပွင့်လင်းကြဖို့ လိုပြီ .. ဆရာနဲ့ ကျောင်းသား ကြား ပွင့်လင်းကြဖို့ လိုပြီ .. သူငယ်ချင်းတွေကြား ပွင့်လင်းကြဖို့ လိုပြီ .. ဒါမှ မလိုလားအပ်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ပြဿနာတွေ မဖြစ်မှာ ..
အိမ်ထောင်မပြုပဲ ကိုယ်ဝန် ဆောင်ချင်တဲ့လူကတော့ နိုင်ငံခြားမှာ လက်ခံပေမယ့် ပြည်တွင်းအတွက်တော့ .. မလွယ်လောက်သေးဘူး ထင်မိပါတယ်
ယဉ်ကျေးမှု မျိုရိုးဂုဏ် အရှက်တရား အဲတာတွေနဲ့ အပြစ်မရှိတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အသက်
အဲဒီဝင်စားတဲ့ ကလေးကလဲ လူတောင်မဖြစ်သေးဘူး အသက်ခံရ … အကုသိုလ်တော်တော်ကြီးတာပဲနော်.
၁) အသက်မပြည့်သေးပါက …(မလိုချင်ရင်) စနစ်တကျဖျက်ပေးသင့်ပါတယ်။
ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်တောင် မထိန်းနိုင်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဟာ
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ၂၀နှစ် မပြည့်မချင်းအရွယ်မရောက်သေးဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။
ယန်း၁၀သောင်းနဲ့ တရားဝင် ဖျက်ပေးပါတယ်။
၂) ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်…မလိုလားအပ်တဲ့..ကိုယ်ဝန်ကို ရရှိလာပါက…
ဆိုက်ကားပေါ်တို့ အမှိုက်ပေါ်မှာပစ်တာတို့က မြန်မာဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာ ခဏခဏပါနေတော့ နည်းပေးလမ်းပြသလိုဖြစ်နေတော့တာပေါ့။
Men, —–, check it out & be careful !!!
Nowadays, men also become prey ( victim ).
အိမ်ထောင်မပြုခင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာကိုတော့ မိသားစုအသိုင်းအ၀ိုင်းက လုံးဝကိုလက်မခံနိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုးတွေ အများကြီးပေါ့။ဒီခေတ်ကြီးမှာတော့ ဒါလုပ်ရင်ဒါဖြစ်မယ်ဆိုတာကို သူတို့လေးတွေတော်တော် များများသိကြတယ်။ဒါပေမဲ့ စမ်းသပ်ကြည့်ကြတယ်။ အသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူတွေရှိသလို အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းကြတယ်သူတွေရှိတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်ထောင်မပြုခင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဆိုတာကို တော့ ခေတ်နောက်ကျတယ်ပဲပြောပြော မြန်မာတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအရ လက်မခံသင့်ဘူးလို့ထင်တာပဲ။ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံကြီးပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံအရ လက်မခံနိုင်လောက်ကြဘူးထင်တယ်။
အစထဲက မလွန်ကျူးအောင်နေဘို့က ပထမ ။(72 hr pills တွေ အားကိုးနဲ့ ကဲသူတွေကလည်း ကဲနေကြပါတယ်)
မှားမိရင်တော့ အပြစ်မရှိတဲ့ကလေးကို ဖျက်ချမယ့်အစား Single mother လုပ်တဲ့သူကို ထောက်ခံပါတယ်။
အဖေမပေါ်ဘဲ ကလေးရတယ်ဆိုတာ တာဝန်မဲ့တဲ့ ယောင်္ကျားကို ယုံမှားတာပါ၊
ဒီတစ်ပတ်ထွက်တဲ့ health digest journal ထဲမှာ အမရာ(ဆေး၁)က အဲဒီ အကြောင်းတွေရေးထားပါတယ်။
အိမ်ထောင် မကျခင် မလိုချင်ပဲ ကိုယ်ဝန်ရလာတဲ့ ကိစ္စမှာ ယောက်ျားတွေ တာဝန်ရှိတယ် ဆိုတာ လူတိုင်း သိပါတယ် .. မိန်းကလေးကတော့ ရှင် ကျွန်မအပေါ် တက်ပါလို့ ဘယ်သူမှ ပြောမှာ မဟုတ်ပါ .. (ချွင်းချက်တွေတော့ ရှိနိုင်ပါတယ် .. စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းချက်ရှိသူတွေပေါ့)
ဒါပေမယ့်လဲ ဖြေရှင်းကြတဲ့အခါကျတော့ .. သူက ကျွန်တော့်ကို favour ပေးလို့ ကျူးလွန်မိတာပါ .. နှစ်ဦး သဘောတူပါ ဆိုရင် မုဒိမ်းမှုလည်း မမြောက် .. အဲဒီတော့ အရေးယူလို့လဲ မရ ..
ဒီလို အကြောင်းတွေကြောင့် ယောက်ျားတွေ ဘာဖြစ်လာသလဲ .. မရလဲ အရင်း ဆိုပြီး ကျူးလွန်ဖို့ ကြိုးစားကြတယ် .. မပေးရင် .. နောက်တစ်ယောက် ..
နစ်နာတာက မိန်းကလေးတွေပါ .. တာဝန်ရှိတဲ့ ယောက်ျားလေးတွေကို ဘယ်လို ပညာပေးသင့်သလဲလို့ စဉ်းစားကြည့်စေချင်တယ်
စားပြီး နားမလည်လုပ်သွားတဲ့ ကောင်တွေကို လူစိတ်ပြန်လည်လာအောင် နားရင်းနှစ်ချက်လောက် အုပ်ပြီး ဆုံးမသင့်တယ်…။ ဒါမှ အသိတရားမရသေးဘူးဆိုလျှင် ကုန်းကုန်းလုပ်ပစ်လိုက်တော့ … ။
တချို့ ကိစ္စတွေမှာ မိန်းကလေးဘက်က လိုချင်လွန်းလို့ အတင်းပေးကျွေးတာလည်းရှိတယ် … ။ ဟိုကောင်က အားနာနာနဲ့သာ စားလိုက်ရတယ်… ။ ပြီးတော့ လစ်ရော… ။ နောက်ဆုံး မျှော်လင့်သလို ဖြစ်မလာတော့မှ တရားရုံး ရောက် ဘာရောက် ဖြစ်တော့တာပဲ … ။ မိန်းမတွေလည်း အယုံမလွယ်သင့်ဘူး ။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ ကတော့ Sex နဲ့ ပတ်သက်ရင် ရှက်သလိုလို ..မပွင့် မလင်းနဲ့ …တကယ်တန်းဖြစ်လာရင် တာမရ ဆီးမရ ဖြစ်ကုန်တယ်.. သိပ်မချုပ်ချယ်ဘဲ.. ပညာပေးတာ ပိုကောင်းပါတယ်…
ဟုတ်ပါတယ် ကိုအောက်အော့ဖ်ရေ …
ကျွန်မတို့ နိုင်ငံမှာ ဗဟုသုတပေးရမယ့် … ကိစ္စတွေကို … မသင့်တော်သလိုလို .. ယဉ်ကျေးမှုကို ဖီဆန်နေသလိုလို … အကြောင်းပြချက် ရေရေရာရာ မရှိပါသော်လည်း … လစ်လျူရှုထားခဲ့ကြတယ် … မိဘတွေကလည်း …သားသမီးတွေကို … အရွယ်ငယ်သေးတယ် … ပညာပေး ဗဟုသုတပေးလိုက်မှ .. စိတ်ဝင်စားသွားမယ့် အကြောင်းတွေလို့ ထင်ပြီး … ပညာပေး အသိပေးဖို့ .. …. ပျက်ကွက်ကြတယ် … ။ တကယ်တမ်း အသက်ရွယ် အပိုင်းခြား အလိုက် .. သက်တူရွယ်တူ အပေါင်း သင်းတွေကြား … ဒီကိစ္စတွေက .. တီးတိုး ပြန့် နှံ့နေတာ … မိဘတွေ သတိမထားမိဘူးပဲ … ။
ဗဟုသုတမရှိပဲ ကြားဖူးနားဝနဲ့ …. လက်တည့်စမ်းချင်တော့ ….. မလိုလားအပ်တဲ့၊ မဖြစ်သင့်တဲ့ ပြသနာတွေ ဖြစ်လာပြီး .. ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်အိမ်ထောင်ကျကာ … စီးပွားရေးဂယက်ရိုက်ပြီး ….. အကွဲကွဲ အပြဲပြဲနဲ့ …. လူညွှန့်တုံးကြရတယ် … ။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုဘက်နဲ့ ပြန်ကြည့်လျှင်တော့ …. အိမ်ထောင်မပြုပဲ ကိုယ်ဝန်ရတဲ့ ကိစ္စက ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး အတော်လေးကို … သူများပြောသမျှ ခံရမယ့် စိတ်ထောင်းကိုယ်ကြေ အခြေနေမျိုးပါပဲ … ။
ဒါဆိုတွေးစရာကတော့ ရှိလာပါပြီ … အိမ်ထောင် မပြုပဲ ရလာတဲ့ကိုယ်ဝန် သူတပါး အပြစ်မပြောရလေအောင် … ဖျက်ချတော့မလားပေါ့ …. ။ ဒီလိုကလည်း …လူသားချင်းစာနာစိတ်နဲ့ …. မလုပ်သင့်၊ မလုပ်အပ်ပါဘူး … ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး … မွေးမယ် ..ကိုယ့်ကလေးကိုယ်ကျွေးနိုင်သည်ဆိုဦးတော့ ….. ယဉ်ကျေးမှုအရ လူအများ လက်မခံနိုင်တဲ့ အခြေနေမို့ ….. ကလေးရဲ့ .. ဖြတ်သန်းရတဲ့ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး …. စိတ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့ …. အရှင်လတ်လတ်ငရဲကျသလို ဖြတ်သန်းရတော့မယ် …. ။
ယဉ်ကျေးမှုအရလည်း .. လက်မခံနိုင်ဘူးပြောပြီး … မျိုးဆက်ပြန့်ပွားရေးကို ဗဟုသုတပညာပေးအနေနဲ့ .. အရှိန်ဟုန်မြင့် .. မီးမောင်းထိုးမပြရဲဘူးဆိုလျှင် …. လူမသိ သူမသိ နွမ်းကြေသွားရတဲ့ .. ဘ၀တွေ … နောက်ဂျန်နရေးရှင်းထိအောင် …. ရှိနေဦးမယ် များနေဦးမယ် ထင်တာပါပဲ … ။ ဖြစ်သင့်တာ ၊ လုပ်သင့်တာ၊ပြောသင့်တာကို … အချိန်ခါ သိပြီး …. လုပ်တတ်ကြလျှင် … ပိုမိုသာယာတဲ့ နိုင်ငံကြီး ဖြစ်လာမယ်ထင်မိတာပါပဲလေ …..
ဓလေ့တွေ ၊ ထုံးတမ်းတွေ ၊ အတင်းဖျင်းတွေကြားမှာ အပြစ်မဲ့စွာ၊မတရားစွာစတေးခံခဲ့ရတဲ့ … လူ့အသက်တွေအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ် … ။ ဒါပေမယ့် …. တစ်ရာမှာ တစ်ယောက် ရှိဖို့ ခက်ခဲတဲ့ စိတ်ဓါတ်ပိုင်ရှင်တစ်ယောက် လက်တွေ့ ရှိခဲ့ပါပြီ … ။ သူမရဲ့စိတ်ဓါတ်ကို အံသြလေးစားမိပါတယ် … သူ့အကြောင်းလေး ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီး ပို့စ်တင်ပါဦးမယ် …။အမှန်ကတော့ .. ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းကသာ အကောင်းဆုံးပါပဲ … ။ သို့သော် … ဘေးကြပ်နံကြပ်ဖြစ်ခဲ့လျှင်တောင် သူ့လို စိတ်ခွန်အားမျိုး … ရှိစေချင်တာကြောင့်ပါ … ။
အမြတ်ခွန်စနစ်နဲ့.. လူမှုဖူလုံရေးစနစ်တွေကို.. စနစ်တကျလုပ်လိုက်ရင်.. စင်ဂယ်မားသားတွေ… အများကြီးထွက်လာမယ်ထင်ပါတယ်..
အဲ.. စင်ဂယ်ဖားသားလည်း ထွက်လာမှာပဲ..
(လူ့ဘောင် ကျင့်ဝတ်လို့ အများလက်ခံထားကြတဲ့ … အိမ်ထောင်မပြုပဲ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့ ကိစ္စကိုလည်း …. ရှုံ့ချ အပြစ်တင်တာမျိုး မလုပ်ပဲ … ကိုယ့်ကိစ္စမဟုတ်သလို သဘောထားပေးကြမယ်ဆိုလျှင် လူ့အသက်ပေါင်းများစွာကို ကယ်တင်ရာရောက်နိုင်ပါတယ် )……
ဒီစကားအတိုင်းနားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ရင် အားလုံးက ကိုယ့်ကိစ္စမဟုတ်သလို သဘောထားပေးလိုက်ကြရင် ယဉ်ကျေးမှု ပေတံကိုချိုးဖျက်ပေးလိုက်ရာ ဖြစ်သွားမယ်။ ကလေးယူတာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာလောက်ကို ထမင်းစားရေသောက်လိုမြင်လာမယ်ဆိုရင် အတွဲတွေ ကျိတ်ပုန်းခုတ်နေရာကနေ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်
အတူအိပ်စားလုပ်လာနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့  ယဉ်ကျေးမှုဟာ ကိုယ်ကျင့်တရား အပေါ်မှာ ခိုင်မာတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက ဆောင်ရွက်သင့်တာကတော့ မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ရင် ကာကွယ်နိုင်မယ့် အသိညဏ် အသိပညာပေးကိစ္စတွေ သေချာဆောင်ရွက်ပေးတာပါပဲ။ နောက်ဆုံး ဂိတ်ဆုံး ကိုယ်ဝန်ရှိလာရင်တောင်မှ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ပြေလည်အောင် လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အစစအရာရာကဏ္ဌစုံကနေ မြင်နိုင်တဲ့ အသိပညာမျိုးဖြစ်အောင် ပညာပေးသင့်တယ်ထင်ပါတယ်။ Etone ရဲ့  ကိုယ့်ကိစ္စမဟုတ်သလိုဆိုတာကတော့ မြန်မာပြည်မှာ ( အမြင်ကျဉ်းတယ် ပြောပြော)….လုံးဝ လုံးဝ နားလည်ပေးဖို့ ခက်ပါမယ်။
ငါ့အနားကို ပြန်လာ ခဲ့ပါတော့